राजेन्द्र मास्के4लेखहरु0comments
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ६०
र राजेन्द्र मास्के	 २८ चैत्र २०७८ १६:०१ 0
किसानले बिस्तारै आफ्नो दाह्री सुमसुम्याउन थाल्यो । एकछिनपछि अड्डातिर हेर्दै बिस्तारै रुखो स्वरमा भन्यो – “यी सबै कुरा यहाँ बन्दैन ... ।” आमाले पुलुक्क उसतिर हेरिन् र भित्र पस्ने मौका खोजन थालिन् । किसानको अनुहार निकै सुन्दर र गम्भीर…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५९
र राजेन्द्र मास्के	 १४ चैत्र २०७८ १४:०१ 0
अग्लो कद, गठिलो शरीर र बाटुलो अनुहार भएको थानेदार भीडतिर आउँदै थियो । उसको टोपी कानतिर झुकेको थियो । जुँगा कसरी निमोठिएको थियो भने एकातिरको जुँगा माथि फर्किएको थियो र अर्कोचाहिँ तलतिर झुकेको थियो, जसले गर्दा उसको अनुहार एकदम टेढो…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५८
राजेन्द्र मास्के	 ७ चैत्र २०७८ १४:०१ 0
फेरि चारैतिर निस्तब्धता फैलियो । घोडाले दुईपल्ट नरम जमीनमा आफ्नो खुरले हिर्कायो । करिब बाह्र, तेह्र वर्षकी एउटी केटी कोठाभित्र पसिन् । उनको सानो चुल्ठो सुनौलो थियो र उनको गोलो अनुहारमा दुई कोमल आँखा निकै सुन्दर देखिन्थे । उनी प्लेटहरुले…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५७
र राजेन्द्र मास्के	 ३० फाल्गुन २०७८ १८:०१ 0
जासुसहरु यसरी मेरोा पछि परेका छन्, मानौं म कुनै ठूलो अपुताली पाउँदै छु १ साँच्ची भनेको, पत्याउनुहुन्न रु अब मैले यहाँबाट कुलेलम ठोके हुन्छ १ इभान, कस्तो छ तिमीलाई अहिले रु निको हुन आँट्यो रु नीलोभ्ना, पाभेलको हालखबर के छ नि रु सासा यहीँ…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५६
र राजेन्द्र मास्के	 २३ फाल्गुन २०७८ १६:०१ 0
“यी सबै कुराहरुका लागि मैले जवाफ दिनुपर्छ ।” – उसले उत्ताउलो स्वरमा भन्यो । आमाले यताउता हेरिन् र झट्ट पाभेलको हातमा त्यो चीट राखिदिइन् । त्यसपछि मात्र सन्तोषको सास फेरिन् । “थाहा छैन, के कुरा गर्ने हो ... ?” – आमाले भनिन् । “मलाई पनि…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५५
र राजेन्द्र मास्के	 १६ फाल्गुन २०७८ २०:०१ 0
“कस्तो बेवकुृफ रहेछु त म !” “लौ त अब हामी जान्छौं !” – सोफियाले उसको ओढ्ने ठीक पार्दै भनिन् – “अब तपाई आराम गर्नोस् !” उनीहरु बैठकमा गए र धेरैबेरसम्म आजका घटनाहरुबारे कुरा गरेर बसिरहे । उनीहरुले त्यस घटनालाई अतीतका रुपमा स्वीकार…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५४
र राजेन्द्र मास्के	 ९ फाल्गुन २०७८ १६:०१ 0
केही दिनपछि आमा र सोफिया गरिब आइमाईको वेशमा निकोलाइको अगाडि आएर उभिए । उनीहरुले सुतीको फाटेको कपडा लगाएका थिए, पिठ्यूँमा झोला बोकेका थिए र हातमा लठ्ठी लिएका थिए । यस पहिरनमा सोफियाको कद अति होचो देखिन्थ्यो । र उनको फिका अनुहार सधैंभन्दा…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५३
र राजेन्द्र मास्के	 २ फाल्गुन २०७८ १६:०१ 0
“छिटो गर, हिँडौं !” – आमाले रुमालले उसको मुख पुछिदिँदै भनिन् । “तपाई मेरो धन्दा नलिनोस् – मलाई दुखेको छैन ।” – उसले रगत थुक्दै भन्यो – “उसले मलाई तरबारको बिँडले हिर्कायो, मैले पनि उसलाई हुनसम्म मजा चखाएँ ! यति जोडले लौराले हिर्काएँ कि…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५२
राजेन्द्र मास्के	 २४ माघ २०७८ १४:०१ 0
“पर्सि तपाई पाभेललाई भेट्न जनुहुँदा उसलाई एउटा चिट दिनुहोला ।” – निकोलाइले आमाको नजिक गएर भन्यो । आमा चियाका कपहरु माझ्दै थिइन् । “कुरा के हो भने हामीले थाहा पाउनुपर्छ ... ।” “बुझेँ, बुझेँ !” – आमाले हतारहतार भनिन् – “हुन्छ, म उसलाई चिट…
म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” शृङ्खला ५१
र राजेन्द्र मास्के	 १७ माघ २०७८ १२:०१ 0
“तपाई जाँदै हुनुहुन्छ ?” – डाक्टरले टाउको नफर्काइकनै सोध्यो । “हो ... ।” बाहिर पुगेपछि आमाले लुद्मिलाबारे सोच्न थालिन् । आमालाई याद आयो, कसरी उनले जबरजस्ती आफ्नो रुवाइ रोकेकी थिइन् ? “रुनसम्म पनि आउँदैन ... ।” मृत्युशैय्यामा…